Kudya Yako Yako Imbwa Yekudya | Martech Zone
Chishanu, February 6, 2009 Svondo, Nyamavhuvhu 23, 2009 Douglas Karr
Iwe unowana iri izwi richishandiswa zvishoma paInternet. Pandinotaura nezvazvo kubatanidzwa blogging, Ini ndinoshandisa izwi iri sezvo vatungamiriri vedu vekambani vanouya zvakananga kubva… yemakambani blogging.
Izvo zvakati, uyu mufananidzo unokurudzira wandakawana kuburikidza neStumbleUpon pa Scott Rope's blog. Taura nezvekudya yako imbwa dofo!
Ndeupi rudzi rwekushambadzira iwe rwaunogona kuwana nekusanganisa chako chigadzirwa? Ndingafarire kuona mimwe mimwe mienzaniso yeiyi!
Tags: data kuendesa sevhisiData managementKukundikana: Chakavanzika Chekubudirirayekutsvaga injini yekushambadzira inodzoka mukudyarachigumbusoWordPress
Kukadzi 6, 2009 na1: 41 PM
Kushambadzira kweB2B kunoda kumwe kuratidzika, kuratidzika kusingakanganwike seizvi.
Semupupuri wekunyora, ini ndakaita rimwe rebhuku rangu rekufungidzira: yaive nemurume mujeri nemusuwo wesero wakavharwa nekiyi bhasikoro reKryptonite. Musoro wenyaya waingove 'Mbavha yebhasikoro'.
Kukadzi 6, 2009 na5: 20 PM
Doug, kunyangwe izvi zvichiita kuti uve nemufananidzo wakanaka, chokwadi, mumaonero angu, chinoita kushambadzira kwakaipa uku.
Chaizvoizvo, yaingova chete $ 500 yemari chaiyo yakarongedzwa pamusoro pemari yekunyepedzera, uye vanhu vaigona kungoshandisa tsoka dzavo kuyedza kuipaza. Mumwe muchengeti aivapo kuti ave nechokwadi chekuti hapana munhu akatyora mirau uye kuti vanhu havagone kuchengeta mari kana vakaityora. -GizModo
Ini ndinofunga kukwidziridzwa uku kunenge kuri kwekunyepedzera, nekuti kungoisa mazana mashoma emadhora uye kuve nechengetedzo iripo zvinoratidza kuti zvirevo pamusoro pechigadzirwa zvinopfuura kugona chaiko. Usadaro iwe unzwe kushomeka zvishoma mushure mekunge wawana izvozvi chokwadi?
Hausi iwo chaiwo muenzaniso we "kudya kwako wega imbwa." Ndiyo software indasitiri izwi rekuita kuyedza pane izvo zvaunogadzira nekuvashandisa kuita rako bhizinesi. It is chimwe chinhu chaunoita kuCompendium, asi kuisa murwi weinenge mari yekunyepedzera uye muchengeti kwemaawa mashoma muchiratidziro cheveruzhinji haisi kuita bhizinesi rako pachigadzirwa chako. Kuti 3M ive "ichidya zvavo imbwa," vaizofanira kushandisa girazi ravo rekuchengetedza kuchengetedza zvakanyanya zvinhu zvekambani.
Vanhu vanofanirwa kubatwa nekuvimbika uye rukudzo, uye nekuzvikudza kushandisa zvigadzirwa zvaunogadzira inzira huru yekuvaratidza kuti unotenda mune rako basa. Kuisa pamwechete inodzorwa foto-op kuburitsa nhema mhere zvinoita kunge kushoma pane kutendeseka nekuremekedza. Uku stunt, kwete kuratidzira kwakasimba kwekuvimba mune zvako zvigadzirwa. Ini ndinofunga 3M inofanirwa kuita nemashandiro akaita vanhu mufananidzo uyu uye nekukumbira ruregerero.
Kukadzi 6, 2009 na8: 33 PM
Wow - iwe uri mucherechedzi chaiye! (kuzadzisa, kwete kutuka).
Re: Kudya zvako dogfood - kungave iyo system isoftware kana kushambadzira, hazvina basa. Ndiwo maonero angu uye ndinonamatira pairi.
Re: Kushambadzira - yangu yekutenda ndeyeyekugadzira kwakabatanidzwa mushambadziro. Kunyangwe iri stunt kana kwete hazvina basa; zvinoita kuti vanhu vafunge nezvechigadzirwa kana sevhisi.
Iwe uri kufunga kuti chinangwa chaive chaicho - kuti kune mamirioni mashoma emadhora kunze pachena pane imwe nzvimbo iyo 3M iri kuchengetedza negirazi ravo. Iko kufungidzira kwanga kwakasiyana - kungoti ivo vaida kutaura nyaya. Kana ndangoona mufananidzo, ndinonzwisisa nyaya yacho.
Mune maonero angu, ndinotenda chishambadziro chine simba.
Kukadzi 7, 2009 na12: 38 PM
Saka urikureva kuti kutsvaga chokwadi pashure kuona iyo pikicha yakanga isisina kukanganisa pamaonero ako eshambadziro? Ini ndinofanotaura kuti angangoita wese munhu anoona uyu mufananidzo uyezve anodzidza kuti yaive yemasikati stunt, paive nemuchengeti, iwe waigona kungokwesha girazi, uye ingangoita mari yese yaive yekunyepedzera - unonzwa kupera moyo. Ichi chiratidzo che zvakaipa kushambadza: paunoona kuti izvo zvaunofunga ndezvechokwadi hazvisi.
Iyo yakanaka pfungwa ye3M kuratidza kusimba kwegirazi ravo pane veruzhinji. Asi wadii kumisikidza cube rakachengetedzwa nemurwi wezvidhinha unozorora papepa regirazi? Kana kugadzira girazi pasi? Izvi zvinotaurira nyaya hombe inova yechokwadi!
Kukadzi 7, 2009 na8: 51 PM
Ini pachokwadi handidi. Kushambadzira kwese kwatinoona mazuva ano kuwedzeredza kuti 'taura nyaya', ingave yekutengesa mota kana kushambadza kweGoogle Adwords. Zvekare zvakare, ini handifunge kuti 3M chinangwa chaive chekunyepa, kwaingova kungouya neshambadziro yekugadzira.
Mune ino kesi, ndinofunga vakaita basa rakanaka. Murwi wematombo pagirazi waisazove nemhedzisiro (mumaonero angu). Izvo zvaizotaura kune 'simba' asi kwete kune 'chengetedzo' yezvinhu.
Zvino, dai pikicha yacho yaiperekedzwa nevhidhiyo kana nyaya ichitaura kuti paive nemiriyoni yemadhora mupaneru uye yakasiiwa kwemazuva makumi matatu munzvimbo yeruzhinji, pasina chengetedzo… ipapo ndinobvumirana newe. Nekudaro, 30M haina kuperekedza nzvimbo pamwe nechero izvo zvinhu.
Hapana munhu, mundangariro dzavo chaidzo aigona kuenda kunovaka bhangi idzva nesafe yakagadzirwa kubva mugirazi rekuchengetedza re3M mushure mekuona izvi, vangadaro? Ini handifunge.
Feb 7, 2009 at 2:42 PM
Icho chiratidzo chine simba! Uye ini ndagara ndichida chirevo chekuti 'idya yako imbwa dhudhudhu'!
Feb 8, 2009 at 9:59 PM
Ndine urombo Doug, asi ndinobvumirana naRobby pane ino. Pandakatanga kuona pikicha ini handina kutenda kuti kambani ichave iyo chivimbo chechigadzirwa chavo zvekuti vanozochengeta mari yakawanda mukati mayo, vachingotya vanhu kuti vaedze kuiba.
Ini ndanga ndichizosiya chirevo pane yako saiti ndichibvunza kana vaine chero akavanzika mavhidhiyo makamera anoratidza vanhu vachiyedza (uye pamwe vachitadza) kutyora girazi.
Asi Robby paakangodurura bhinzi nezvekuva nemurindi, achingoshandisa tsoka dzako uye aine mari zhinji yekunyepera, ndakanzwa kunyengedzwa.
Ini handifunge kuti ndinombofunga zvakaderera zve3M (ini ndichiri kutenga post-it manotsi) asi kushambadza zviri pachena kwakarasa kukosha kwayo kwese neni uye handidi kubuda munzira yangu kutenga girazi ravo rekuchengetedza.
Feb 14, 2009 at 2:43 PM
Tichifunga nezve mushandirapamwe uyu wakatanga muna Kukadzi 2005, ndingati izvi zvinopa chirevo chitsva kumuswe murefu. Ndinovimba iyo PR / Marcom timu ichine yavo yambiro yegoogle yakamisikidzwa- iyi tambo yemapositi ichavashamisa kunze
2005 chinyorwa: http://www.37signals.com/svn/archives/001064.php
Kubva pakuona kwekutaurirana, ichi chiriporipo chinoonekwa chinoonekwa chinotaurisa chiratidzo, chinosimbisa hunhu hwavo uye chinopa meseji ine simba. icho chinhu chakaoma kuita pachiteshi chebhazi.
Aug 7, 2009 na4: 51 PM
Robby Slaughter zviri pachena hainzwisise nyika yekutengesa ... urikutaura nezvazvo izvozvi handiti iwe, Robby? Zvakanaka, saka, zvinoita sekunge yaive tenzi kushambadzira chishandiso. Kushambadzira ndekwe kugadzira mufananidzo usingakanganwike mupfungwa dzemutengi, uye chiito ichi hachizoonekwe. Kunyangwe yako inane inofanirwa kukurukura nezvakarurama / kusarongeka, uye zvisinei kana icho chigadzirwa chichiita sezvaungaita kubva pamufananidzo…. iwe zvino wave kuziva zvinoshamisa nezvechigadzirwa chayo. Iwe ikozvino une isingakanganike mufananidzo we3M yekuchengetedza girazi mumusoro wako. Saka? Nyanzvi yekushambadzira, nguva.